प्रेमको बिजारोपण | Nagarik News - Nepal Republic Media
१८ कार्तिक २०७४ १८ मिनेट पाठ
२९ मार्च १९६९ को सौभाग्यशाली सन्ध्या मेरा मानसपटलमा सधैँ तरोताजा रहनेछ । त्यस दिन पहिलोपटक मैले आफ्नो गुरु आचार्य रजनीशको दर्शन पाए“ । त्यसबखत म पटना युनिभर्सिटीमा इन्जिनियरिङको विद्यार्थी थिएँ । म त्यहा“को सिन्हा पुस्तकालयमा अध्ययनका लागि जाने गर्थें । पुस्तकालयमा अत्यन्त दुर्लभ पुस्तकको संकलन थियो । धर्म, दर्शनशास्त्र र ज्योतिषको अध्ययनका लागि म त्यहा“ नियमित जाने गर्थें । मध्याह्न पुस्तकालयबाट निस्केपछि सूचनापाटीमा एउटा पम्प्लेट टा“सिएको देखे“, जसमा सोही दिन बेलुका त्यही पुस्तकालयको लनमा आचार्य रजनीशले प्रवचन दिने जानकारी थियो । त्यसअघि मैले यो नाम कहिल्यै सुनेको थिइनँ ।
स्कुले जीवनदेखि नै ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्साप्रति मेरो विशेष रुचि थियो । त्यसबखत कुनै सद्गुरु नभेटाए पनि मैले पुस्तककै सहायताले ध्यान र योगका अभ्यास गरिरहेको थिए“ । मैले त्यस बखतका उत्तर भारतका प्रायः सबै आश्रम चहारिसकेको थिए“ र नाम चलेका सबै गुरुलाई भेटिसकेको थिए“ । त्यसमध्ये दीक्षा दिने अनेक गुरुबाट दीक्षित पनि भइसकेको थिए“ । तीमध्ये केही गुरु हुन्, आनन्दमूर्तिजी, महर्षि महेश योगी, अनुकूल चन्द ठाकुर, ऋषिकेशका स्वामी शिवानन्दजी, राष्ट्रियसेवक संघका माधवराज गोलवर्कर, रामकृष्ण आश्रमका सन्न्यासीहरू इत्यादि । यिनीहरू सबैस“ग आफ्नै विशेषता थिए र मैले यिनीहरूबाट केही न केही सिक्ने मौका अवश्यै पाएको हुँ, तर कहीँ पनि मेरो आन्तरिक तारतम्य मिलिरहेको थिएन र मेरो अन्तर्मन आफ्नो मार्गदर्शक गुरुको प्रतीक्षामै थियो ।
विवेकानन्दको तेज र सौर्य तथा गान्धीको सत्य र अहिंसा यी चारै दर्शनबीच समन्वयको खोजमा थिए“ । यिनीहरूको जीवनकालमा म किन जन्मिन, यिनको शिष्य किन बन्न पाइनँ भनेर म रुने गर्थें
त्यसबखत विद्यार्थीका दुई प्रमुख संगठन थिए । एक थियो, वामपन्थी विचारबाट प्रभावित स्टुडेन्ट फेडरेसन र अर्को दक्षिणपन्थी जनसंघको राष्ट्रिय विद्यार्थी परिषद् । माधवराज सदाशिव गोलवर्करको विद्वता र साधुताबाट म प्रभावित भए“ र केही वर्ष राष्ट्रियसेवक संघको शाखा सञ्चालक पनि बने“ । पछि विभिन्न आश्रममा तथाकथित साधुको दोहोरो चरित्र र पाखण्डी व्यक्तित्वले मभित्र धर्मप्रति वितृष्णा पनि पैदा भइरहेको थियो । समाजवादी र वामपन्थी चिन्तनप्रति झुकाव बढिरहेको थियो । त्यसबखत भारतमा चलेका सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनबाट म ज्यादै प्रभावित हुन पुगे“ । यो आन्दोलन गान्धी, बिनोबाको दर्शनबाट प्रभावित ‘सर्वोदय आन्दोलन’ थियो । त्यसैबखत जयप्रकाश नारायण पनि समाजवादी पार्टीको सक्रिय राजनीति छोडेर सर्वोदयमा लागेका थिए ।
मैले जयप्रकाश नारायणलाई बिहारको मसहरीमा व्यक्तिगत रूपमा भेटेको थिएँ । उनमा मैले सत्यको गहन प्यास देखेँ । गरिब र निमुखाको जीवन उद्धारका लागि उनको हृदयमा मैले गहिरो दया र करुणा देखेँ । मैले उहा“भित्र एक राजनीतिज्ञ कम तर सन्त व्यक्तित्व बढी देखेँ । उहा“बाट प्रभावित भएर मैलैे आफ्नो जीवन सर्वोदय आन्दोलनमै समर्पित गर्ने इच्छा पोखेँ । उहा“ मेरो उत्साह देखेर खुसी हुनुभयो र मलाई हौसला दिँदै भन्नुभयो, ‘तिमी आफ्नो इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गरेर आऊ । भारतीय गाउ“को पिछडापनबाट मुक्ति र त्यसको उत्थानका लागि मस“ग धेरै योजना छन् र मलाई धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहयोगको आश्वासन छ । तिम्रो इन्जिनियरिङ विद्या मलाई काम लाग्छ ।’
उहा“ भारतका प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । तर, बिहारको मसहरी भन्ने सानो गाउ“मा नक्सलाइटको हिंस्रक विद्रोहलाई शान्त पार्न गाउ“मै एक झुपडीमा बसी प्रयासरत हुनुहुन्थ्यो । उहा“को त्याग र सत्यनिष्ठाले मेरो आ“खामा आ“सु ल्यायो । मैले इन्जिनियरिङ पास गरेपछि जयप्रकाशकै सर्वोदयमै समर्पित हुने भाव जाग्यो।
ओशोलाई पहिलोचोटि भेटेको समय म बडो द्विविधा र विषादको स्थितिमा थिए“ । मैले आफ्नो मार्ग बुझिसकेको थिइनँ । कृष्णको भक्ति र उत्सव, बुद्धको शान्ति र ध्यान, विवेकानन्दको तेज र सौर्य तथा गान्धीको सत्य र अहिंसा यी चारै दर्शनबीच समन्वयको खोजमा थिए“ । यिनीहरूको जीवनकालमा म किन जन्मिन, यिनको शिष्य किन बन्न पाइनँ भनेर म रुने गर्थें ।
बच्चादेखि नै साधु, सन्त र जोगीहरूप्रतिको आकर्षण ममा थियो । त्यसैले २९ मार्चको त्यो सौभाग्यशाली सन्ध्यामा म मेरा सहपाठीस“ग आचार्यको प्रवचन सुन्न पहिलो पंक्तिमा गएर बसेँ । ठीक ६ बजे सेतो लुङ्गी लगाएका र सेतो च्यादरले शरीर बेरेका एक तेजस्वी युवा साधु मञ्चमा उपस्थित भए । उमेरले तेस्रो दशकमा हि“डिरहेका लाग्ने, लामो, चम्किलो दारी र कपाल, उन्नत ललाट र सम्मोहक आ“खा भएका आचार्य रजनीश मञ्चमा ओछ्याइएको गद्दीमा बसे । उनको उपस्थिति सघन थियो र व्यक्तिŒवमा एक अद्भूत आकर्षण थियो । पहिलो कुरा, जसले मलाई अभिभूत ग¥यो, त्यो हो उनको शारीरिक सौन्दर्य र व्यक्तित्वको तेज । मलाई उनी कुनै ऋषिलोकबाट अवतरित भएका चिरपरिचित देवपुरुषजस्ता लागे।
आचार्यलाई मीरा र कबिरका भजन अति प्रिय भएकाले उनको प्रवचनपूर्व एक युवतीले कबिरका भजन गाइन् । वसन्तको त्यो साँझ, गंगा किनारको मन्दमन्द शीतल हावा, कबिरका ती मर्मस्पर्शी पद, युवतीको मधुर स्वर, त्यसमा पनि आचार्यको रहस्यमय, सम्मोहक उपस्थिति, यो सबैले मेरो हृदयको कोमल तन्तुलाई स्पर्श ग¥यो । मेरा आ“खाबाट आ“सु बर्सिन थाले । आँखा पुछ्दापुछ्दै पूरै रुमाल भिज्यो । मेरा सहपाठी अक्क न बक्क भए र सोधे, ‘तिमीलाई के भएको ? किन यसरी रोएको ?’
मस“ग शब्दमा भन्न सक्ने कुनै उत्तर थिएन । भजनपछि आचार्यको संगीतमय मधुर स्वर गुन्जियो, ‘मेरे प्रिय आत्मन् ।’
त्यो जादुमयी स्वरले आ“खाभित्र बा“धिएको आ“सुको बा“धलाई फेरि भत्काइदियो । म भक्कानो छाडेर रुन थालेँ । मेरा साथी आश्चर्यचकित हुनु त स्वाभाविक नै थियो, म आफैँ पनि आश्चर्यचकित थिए“ र सोच्दै थिए“, ‘किन यो सर्वथा अपरिचित व्यक्तिको उपस्थितिले मेरो हृदयलाई यसरी रुन बाध्य तुल्याइरहेको छ ?’
आचार्य आफ्नो प्रवचनमा ब्रह्मचर्य, गान्धीवाद र धर्मगुरुहरूको कठोर आलोचना गरिरहेका थिए, जुन मेरो आजसम्मको शिक्षण, अध्ययन र संस्कारको पूर्ण विरुद्धमा थियो । मेरो मस्तिष्क उनको विचारस“ग असहमति प्रकट गरिरहेको थियो, तर गहिराइमा मेरो हृदय उनको तर्कस“ग पूर्ण सहमति जनाइरहेको थियो । एक श्रोताले प्रश्न गरे, ‘गान्धी सन्त हुनुहुन्थ्यो, सधै“ रेलमा तृतीय श्रेणीमा यात्रा गर्नुहुन्थ्यो तर तपाईं साधु भएर किन प्रथम क्लासमा यात्रा गर्नुहुन्छ ?’ आचार्यले जवाफ दिए, ‘तृतीय श्रेणीमा म यात्रा गर्छु, किनभने भारतीय रेलमा चौथो श्रेणी छैन भनी गान्धी भन्थे तर म भन्छु म प्रथम श्रेणीमा यात्रा गर्छु, किनभने भारतीय रेलमा अहिलेसम्म एसी कोच आइसकेको छैन । जुन दिन भारतीय रेलमा एसी कोच हुन्छ, म त्यस दिनदेखि प्रथम श्रेणीमा यात्रा गर्न छोड्छु । गान्धीजस्तो म गरिबलाई दरिद्रनारायण भन्न सक्दिनँ, गरिबीलाई म बेवकुफी र अवैज्ञानिक चिन्तनबाट जन्मेको महारोग ठान्छु । आज विज्ञान र प्रविधिको सहायताले सम्पूर्ण युरोप र अमेरिका एयर कन्डिसनमा हि“डिरहेको छ भने हामीले मात्र कुन चाहिँ त्यस्तो घनघोर पाप गरेका छौँ र सधैँ थर्डक्लासमा मात्र हिँडिराखौँ ?’
आचार्य यस्तै अकाट्य तर्क दिएर आफ्ना विचारलाई राख्दै हुनुहुन्थ्यो । उहा“का विचारस“ग असहमत हुनेहरू पनि उहा“का तार्किक विश्लेषणबाट विस्मित र अभिभूत थिए । उहा“को बौद्धिक विश्लेषण र तर्कलाई खण्डन गर्ने मस“ग कुनै आधार थिएन । मेरा सारा सिद्धान्त र विचार ओशोको एक घन्टाको तार्किक प्रहारबाट क्षतविक्षत भइरहेको थियो । उहा“का विचारप्रति मेरो मस्तिष्कले निरन्तर विरोध जनाइरहे पनि अत्यन्त गहिरोअन्तर्मन उहा“प्रति पूर्ण समर्पित भइसकेको थियो । मेरो अन्तर्मनले अनुभव गरिरहेको थियो, जुन प्रज्ञापुरुष र गुरुको खोजमा म एकान्तमा रुन्थे, ती व्यक्ति आचार्य रजनीश नै हुनुहुन्छ र त्यो खोजले आफ्नो गन्तव्य भेटायो । मेरो चित्त समय र स्थानको सीमाबाट पार कहीँ थियो ।
आचार्यले यी शब्दबाट आफ्नो प्रवचनको अन्त्य गर्नुभयो, ‘आपने इतनी धैर्य और प्रेम से मेरी बातों को सुना । मै अनुग्रहित हुँ । इन बातों पर विश्वास करने कि जरुरत नही है । इन बातों पर सन्देह करे, चिन्तन, मनन करे । इस चिन्तन के धरातल में जो अच्छा लगे उसको ही स्वीकार करे । अन्त में आप सबके अन्दर बैठे परमात्माको प्रणाम करता हुँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करे ।’
आचार्यको प्रवचन सकिनेबित्तिकै उहा“को चरण स्पर्श गर्ने र अँगालो हाल्नेको भीडले उहाँलाई घेर्‍यो । त्यो भीडमा छिर्न मैले हिम्मत जुटाउन सकिनँ । नजिकै स्टलमा आचार्यको विचारमा आधारित हिन्दी पत्रिका उक्रान्तको वार्षिक ग्राहक बन्नेहरू थिए । वार्षिक सदस्यता शुल्क १२ रुपैया“ थियो । अर्धवार्षिक ६ रुपैया“ । मेरो खल्तीमा जम्मा तीन रुपैया“ मात्रै थियो । मैले ती स्वयंसेवकलाई मलाई त्रैमासिक ग्राहक बनाइदिनुस् भनी आग्रह गरेँ । तर, त्रैमासिक ग्राहकको कुनै प्रावधान नभएको उनले बताए । मैले आग्रह गरेँ, ‘यी तीन रुपैया“ लिई तपाईं मलाई वार्षिक ग्राहकै बनाइदिनुस् । म तपाईंलाई मनी अर्डरद्वारा बा“की नौ रुपैया“ जवलपुर पठाइदिनेछु ।’ उनले मलाई विश्वास गरे र नौ रुपैया“ बा“की लेखिएको वार्षिक सदस्य बनेको बिलसहित युक्रान्तको पहिलो अंक मेरो हातमा थमाए । त्यो मेरो जीवनको अत्यन्त बुद्धिमतापूर्ण र सर्वोत्तम लगानी ठहरियो । जसले मेरो सम्पूर्ण जीवन त बदलियो नै, अन्य हजारौँ साधकको जीवनको रूपान्तरणको कारण बन्न गयो।
केही समयपछि मञ्चबाट सूचित गरियो कि रविन्द्र भवनमा जैन समाजले आयोजित गरेको सभामा आचार्यले भगवान् महावीरका बारेमा प्रवचन दिनुहुनेछ । त्यसपछि सोझै रात्रिको तुफान मेलबाट जवलपुर फर्कनु हुनेछ।
यो सुनी उहाँको सम्मोहनले मैले रविन्द्र भवन जाने निधो गरेँ । आचार्य आफ्नो एम्बेसडर कारमा रविन्द्र भवनतिर लाग्नुभयो । मस“ग पैसा नभएकाले लगभग चार किलोमिटर दूरी मैले दौडेरै पूरा गरेँ । त्यसबेलाका आचार्यका प्रवचन बडो आग्नेय हुन्थे र अन्धभक्ति तथा अन्धविश्वासप्रति उहा“ कठोर प्रहार गर्नुहुन्थ्यो । सोहीअनुरूप उहा“ले जैनीहरूले महावीरलाई नबुझी खाली अन्धभक्ति गरेकामा गहिरो आलोचना गरिरहनुभएको थियो । आयोजकहरू सबै जैनी थिए । उनीहरू अक्क न बक्क भई आचार्यलाई प्रवचनका लागि बोलाएकामा पछुताइरहेका थिए।
आचार्य जतिजति आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूको व्यग्रता झन् बढ्थ्यो तर सुन्नेहरू सबै मन्त्रमुग्ध थिए । मलाई भय लाग्यो, कहीँ आचार्यप्रति कुनै अनिष्ट त हुँदैन ? तर, जैनीहरू अहिंस्रक र सहिष्णु हुन्छन् । आचार्यको प्रवचन सकियो । उहा“ फर्किन रेल स्टेसनतर्फ लाग्नुभयो । उहा“लाई बिदा गर्न स्टेसनसम्म जाने चाहना हुँदाहुँदै पनि न मसँग पैसा थियो, न त कारको पछाडि दौडने शक्ति नै । मैले छात्रवाससम्मको सात किलोमिटर दूरी हिँडेर तय गरेँ, पहिलो नजरकै प्रेमको उल्लास र आनन्दका साथ।
त्यही सन्ध्यामा एक आन्तरिक समर्पण घट्यो । अन्तर्बोध भयो । ‘यसै गुरुको प्रतीक्षामा म आकुलव्याकुल भएर भौँतारिरहेको थिए“, अब यिनको साथ म कहिल्यै छाड्दिनँ, अब म पछाडि फर्कनेछैन’ भन्ने अन्तर्बोधपछि आज ४८ वसन्त बितिसके, त्यो दिनमा रोपिएका यी संकल्पका सुन्दर बीज आजसम्म मौलाइरहेका छन्।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७४ ११:२५ शनिबार